Hanjabaada dadka ka soo horjeedda Mashruuca Sapanca Cable Car | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaHanjabaada Dadweynaha ee Looga Hortagayo Sapanca Ropeway Mashruuca
15 / 11 / 2019 54 Sakarya, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER, VIDEO
khatar ku ah shacabka ka soo horjeeday mashruuca xariga jarista ee sapanca
Hanjabaada Dadka ka hortagaya mashruuca xariga ah ee 'Sapanca Ropeway' Waxaan ku Wareejineynaa Madaxaaga '; Xaafadda Kırkpınar ee Sapanca, ciidamada amniga ee diidan geedka jarista ayaa ku hanjabay inay s bitek qaniinaan madaxaaga.
Sapanca's Kırkpınar oo u dhow mashruuca xargaha ee laga samaynayo geedaha u dhow geedaha ayaa bilaabay inuu mar kale hoos u dhaco. Laba bilood iyo badh markay teendhadii joogeen dadka fulinayey iska caabinta teendhada si loo joojiyo geedka ayaa aadey aagga.
Markii la jaray geedaha geedka geedka la jarayo iyada oo la kaashanayo ciidamada nabadgelyada, ayaa sarkaalka amniga ee shirkadda u sheegaya muwaadinku, "Waan madaxa qaniinayaa" ayaa sababay falcelin. Sarkaalkii lagu soo oogay dacwad dambiyeed ayaa gacanta lagu dhigay.
Gawraca ka dib, dadka ku nool xaafada waxay aadeen xafiiska Duqa Magaalada Sapanca waxayna weydiisteen joojinta gawraca iyo joojinta mashruuca. Kadib Duqa Magaalada Sapanca ayaa booqday aagga ilaalada markii ugu horeysay wuxuuna balan qaaday inuu la kulmi doono Duqa Magaalada Sakarya.
Faragalinta aagga teendhada
Teendhadii waardiyaha ee uu aasaasay Kırkpınarlılar waxaa ciidamada kala daadiyay saacadihii hore ee waaberigii waxaana la garaacay dadkii. Kırkpınarlılar ayaa ka mudaaharaaday dhacdadaas, wuxuu jaray wadooyinka isla markaana dib u dhistay teendhooyinkoodii aag kale.
3 waxay qorsheyneysaa inay jarto kun geed
Mashruuca Teleferic ayaa loo furay si loogu wanaajiyo qaabka-ku-wareejinta-suuqa kala iibsiga ee Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya. Shirkadda kaliya ee kaqeyb qaadatay hindisada. 10 Sebtembar 2018 sano-qaybsiga dakhliga wadaagga ah waxaa lagu saxeexay iskaashiga Bursa Teleferik AŞ-Teleferik Holding AŞ. Ilaa hada, afar dacwad ayaa laga xareeyay mashruuca.
Xariga Kırkpınarlılar wuxuu qorsheeyay in uu dhiso awoowe tuulada sanadki 1945 si loogu isticmaalo tabaruc shuruudaysan oo tuulo u ah hay'adda sharciga ee tuulada ayaa sheegay in wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah oo ka socda aaggan aan lagu qaban karin heshiiska deeqda, ayuu yidhi. Naadiga Kırkpınar iyo Naadiga Ciyaaraha Dibadda, TMMOB Sakarya Laamaha iyo ururada samafalka ee Sakarya waxay taageerayaan halganka xaafada.
Ururka Bey'adda: Isku dheellitirka deegaanka ee harada Sapanca waa la carqaladeyn doonaa
Ururka Duurjoogta, oo dhalleeceeya mashruuca xarig-jarka ee gobolka iyo waxqabadyada ka dhanka ah dadka. Mashruucu wuxuu ku dambayn doonaa goynta geedaha 3 kun oo geedo ah isla markaana ka dhigaya aag xaafad ka kiraynaysa. Mashruucan, huteelo, maqaayado, buunbuur ayaa la dhisi doonaa meelaha cagaaran iyo aagagga duurka ayaa la burburin doonaa isku dheelitirka deegaanka ee harada Lake Sapanca. Xaafaddu waxay u furi doontaa nabaad-guur iyo daadad ku tegaya goynta geedaha ”. (Yeşilgazet in)
İmamoğlu wuxuu la kulmay dadka reer Sapanca
Karşıyaka Dadku waxay ka jawaabaan Mashruuca Gorno Hill Cable Car
Ansixinta Golaha oo ka hadlaya Mashruuca Isgaadhsiinta Sapanca
Mashruuca Sapanca Cable Car Mashruuca La Ansixiyay
Dadka reer Derbent waxay rabaan dhammaystirka mashruuca xarig-jarka
Shaqada ayaa bilowday dhismaha gaari telefishan oo ku yaal Sapanca
Sapanca wuxuu u guurayaa hindise loogu talagalay mashruuca wadada
Hantidii loogu talagalay mashruuca "Cable Cable" ee Sapanca
Heshiiska Project Ropeway Sapanca in la saxiixo maanta
Mashruuca Jidadka ee laga fulin doono Sapanca…
Cable Car Resiliance ee Haweenka Sapanca